Izindaba - Ifektri yezingubo yaseSri-lanka
ISri-Lanka Garment Factory
I-Ebony ingelinye lamafemu amakhulu kakhulu ebhulukwe eSri Lanka. NgoSepthemba 2016, sathola umyalezo olula ovela kumphathi uRaseen kuwebhusayithi. Bathe bafuna ukuthenga izindwangu zesudi eShaoxing. Uzakwethu akazange alibazise impendulo ngenxa yalo mlayezo olula. Ikhasimende lisitshele ukuthi lidinga i-TR80 / 20 300GM. Ngaphezu kwalokho, wayethuthukisa ezinye izindwangu zebhulukwe esizincomayo. Senze masisha ikhotheshini eningiliziwe futhi eqinile, futhi sathumela masampula amasampula ethu abekiselwe nemikhiqizo enconyiwe eSri Lanka. Kodwa-ke, lesi sikhathi asiphumelelanga, futhi ikhasimende licabanga ukuthi umkhiqizo esiwuthumele awuhlangabezani nemibono yawo. Ngakho kusukela ngoJuni kuze kube sekupheleni kweminyaka engu-16, sathumela amasampula ayisithupha elandelana. Zonke azibonwanga izivakashi ngenxa yemizwa, ukujula kombala, nezinye izizathu. Besikhungathekile, futhi ngisho namazwi ahlukene avela eqenjini.
Kodwa asizange siphele amandla. Ekuxhumaneni nesivakashi ezinyangeni eziyisi-6 ezedlule, yize ebengakhulumi kakhulu, besicabanga ukuthi isivakashi besithembekile, futhi kungenzeka ukuthi besingamqondi ngokwanele. Ngokuya ngomgomo wamakhasimende kuqala, siqhube umhlangano wethimba wokuhlaziya wonke amasampula athunyelwe esikhathini esedlule nempendulo evela kumakhasimende. Ekugcineni, sivumela imboni ukuthi inikeze amakhasimende isampula yamahhala. Ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokuthunyelwa kwamasampuli, abalingani babeshubile kakhulu.
Ngemuva kokuthi amasampuli afike eSri Lanka, ikhasimende lisamane lisiphendule, yebo, yilokhu engikufunayo, ngizoza eChina ukuzoxoxa nawe ngale oda. Ngaleso sikhathi, iqembu lalibila! Yonke imizamo esiyenzile kulezi zinyanga eziyi-6 ezedlule, konke ukuphikelela kwethu ekugcineni sekuqashelwe! Zonke izinkathazo nokungabaza kwanyamalala ngenxa yalolu lwazi. Futhi ngiyazi, lokhu kumane kuyisiqalo.
NgoDisemba, iShaoxing, China. Yize ebukeka enobungane kakhulu lapho ehlangana namakhasimende, uhlala emamatheka, kepha lapho ikhasimende liza enkampanini yethu namasampula alo, uphakamisa ukuthi yize imikhiqizo yethu ibukeka iyinhle, kepha intengo iphezulu kunalokho eyayiyikho. Indawo yabaphakeli ibiza kakhulu futhi unethemba lokuthi singamnika inani langempela. Sine iminyaka eminingi nakho umkhakha. Siyazi ukuthi ukonga izindleko kungukuphela kwesisekelo samakhasimende okusikhetha. Ngokushesha sithathe amasampula wamakhasimende ukuyohlaziya. Sithole ukuthi umkhiqizo wakhe bekungewona okokusebenza okungcono kakhulu kwendwangu kuqala, bese kuba ngumhlinzeki wokugcina. Enqubeni yokudaya, inqubo yokugunda izinwele zokufakelwa ayikho. Lokhu akubonakali ezindwangwini ezimnyama, kepha uma ubheka ngokucophelela lezo mpunga nokumhlophe, kuzobonakala. Ngasikhathi sinye, sihlinzeka nombiko wokuhlolwa kwe-SGS ovela eceleni. Imikhiqizo yethu ihlangabezana ngokugcwele nezindinganiso zokuhlolwa kwe-SGS ngokuya ngokushesha kombala, izakhiwo zomzimba, nezidingo zokuvikelwa kwemvelo.
Ngalesi sikhathi, ikhasimende ligculisekile ekugcineni, futhi lasinika i-oda lokuhlola, ikhabethe elincane, sekwephuze kakhulu ukugubha, siyazi ukuthi leli yiphepha nje lethu lokuhlola, kufanele simnikeze iphepha lokuphendula elifanele.
Ku-2017, i-YUNAI ekugcineni yaba nenhlanhla yokuba nguzakwethu weqhinga le-Ebony. Sivakashele izimboni zethu futhi sashintshana ngemibono ukwenza ngcono umkhiqizo wethu. Kusukela ekuhleleni kuya ekuqinisekiseni naseku-odeni, siqhubeke nokuxhumana nokwenza ngcono inkampani ngayinye. URaseen ngathi, ngaleso sikhathi, lapho ngithola amasampuli akho okwesikhombisa, ngase ngikubonile ngaphambi kokuthi ngivule. Akekho umhlinzeki owenze njengawe, futhi ngathi wena usinikeze lonke iqembu ngokujulile. Isifundo esisodwa, ake siqonde iqiniso eliningi, ngiyabonga.
Manje, uRaseen akaseyena umnumzane osenza sizizwe sinovalo. Amagama akhe awakabi maningi, kepha njalo uma efika kulwazi, sizothi, hheyi, bangani, vukani nibe nezinselelo ezintsha!